Chappie (2015) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Movies/TV » Chappie (2015)	8
Posted by Foolish Girl on Aug 11, 2015 in Movies/TV | 8 comments
Foolish Girl ကြည့်မိသမျှ
ဒီကားလေးက 2015 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိတဲ့ကားသစ်လေးတစ်ကားပါ
ဒါရိုက်တာ Neill Blomkamp ကရိုက်ကူးထားပါတယ်
Sharlto Copley ကစက်ရုပ် CHAPPiE ရဲ့အသံကိုသရုပ်ဖော်ပေးထားပါတယ်
Dev Patel ကတော့ Slumdog Millionaire ကားထဲကအိန္ဒိယမင်းသားပါ သူကတော့ Deon Wilson အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်
အမေရိကန်လက်နက်ကိုင်မာဖီးယားတွေအရမ်းသောင်းကျန်းတဲ့အတွက်အစိုးရကနေ စက်ရုပ်ရဲတွေကိုတီထွင်ပြီးနှိမ်နှင်းခဲ့တယ်။ Deon Wilson က စက်ရုပ်တွေထွင်တဲ့ Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အတိုချုံးပြောရရင် တစ်ခြားစက်ရုပ်တွေက ဘာလုပ်ပါဘာလုပ်ပါဆိုတဲ့ Command ပေးရတယ် CHAPPiE ကတော့အဲလိုမဟုတ်ဘဲ လူသားတစ်ယောက်မွေးဖွားလာပြီးအရာရာကိုသူကိုယ်တိုင်သင်ယူရသလိုအဲဒီစက်ရုပ်ကသူကိုယ်တိုင်အရာရာကိုလေ့လာရတယ် ဒါပေမယ့် သူကလေ့လာစွမ်းအားမှတ်ဥာဏ်တွေအရမ်းကောင်းတယ် စက်ရုပ်လေးကကလေးလေးလိုဖြစ်ပြီးသူ့လှုပ်ရှားမှုတွေသူ့ခံစားချက်တွေကိုကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းလို့ဝေငှလိုက်တာပါ
အသေးစိတ်plot လေးကတော့အောက်မှာပြောထားတဲ့ wiki link မှာ ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်
အေအိုင် အကြောင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသပါတဲ့ ကား တစ်ကား ပေါ့။
ဒီကားထဲလည်း ဗီလိန်ကို ဟူးဂျက်မန်း ကို သုံးသွားတာမို့ ရုပ်လုံးကြွသွားတယ်။
Ex-machina ထက် ပိုကြိုက်တယ်။
kai says: ဘယ်လိုပြကြပြကြ… ဖြစ်လာမဲ့အမှန်တရားနဲ့ကနီးစပ်လာတယ်လို့.. ခံစားမိတယ်..။
အဲဒီအကောင်တွေလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ချိန်ကြရင်.. .. ငါးပါးသီလသမားတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ.. သိချင်..။
By Lauren Walker 5/14/15 at 3:50 PM“Computers will overtake humans with AI [artificial intelligence] at some point within the next 100 years,” Stephen Hawking, the renowned theoretical physicist and cosmologist, said on Tuesday at the Zeitgeist 2015 conference in London. “When that happens, we need to make sure the computers have goals aligned with ours.
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: (အဲဒီအကောင်တွေလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ချိန်ကြရင်.. .. ငါးပါးသီလသမားတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ.. သိချင်..။)
လူရဲ့စိတ်ဆိုတာ မတည်မငြိ်မ်ဘဲ ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်
အဲတော့ ထည့်ပေးထားတာကလွဲရင်ဘာမှ ကွန့်ပြီးစဉ်းစားဘို့မတတ်ဘူး။
အဲတော့ ဘယ်နိတိ ဘယ်အယူအဆ နဲ့ မှ သူ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းဘို့မလိုဘူး
ထည့် ထားတဲ့ ဆားကစ်မဖောက်ရင် သူ့ အပြုအမူလဲ မဖောက်ဘူးပေ့ါ
စက်ရုပ်ခေတ်မှာ ဘာကိုးကွယ် မူ့ မှလဲ ရှိဘို့ မလိုအပ်မှာကတော့ အမှန်ပါဘဲ
kai says: ဆရာပေါက်.. အဲဒီ ချက်ပီနဲ့.. အိပ်စ်မကီနာ ရုပ်ရှင်တွေမကြည့်ရသေးဖူးထင်တယ်..။
ရုပ်ရှင်တွေရဲ့..အဓိက.. ရည်ညွှန်းပြချက်က.. “စက်ရုပ်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ခံစားမူ့ ရှိခြင်း” ဆိုတာကို အခြေခံသဗျ..။
စတီဗင်ဟော့ကင်းက.. လာမယ့်နှစ်၁၀၀ အတွင်း.. တချိန်ချိန်မှာ အေအိုင်ရိုဘော့တွေဖြစ်လာမယ်တဲ့..
စွန့်ဦးထီထွင်သူတွေရဲ့.. ဘုရားတဆူဖြစ်တဲ့..Elon Musk နဲ့လည်း ဆွေးနွေးနေတယ်ကြားလိုက်သေး..
ကျုပ်ကတော့.. အဲဒီအချိန်ရောက်ရင်.. ပထမဆုံး ပြိုကျပျက်ဆီးမှာက.. ထာဝရဘုရားသခင်က အရာရာကိုဖန်ဆင်းခြင်း ဆိုတဲ့…အယူအဆလို့ထင်တယ်…။
ကမ္ဘာပျက်သွားတာ ဖြစ်လာမယ်ပေါ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်က သိပ္ပွံဆန်းကြယ်လို စက်ရုပ်ကားလို လူသတ်ကား စုန်းကား တစ္ဆေကား မကြည့်တာများတယ်
ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ မကြည့် ဘူး သေးတာအမှန်ပါဘဲ
ဒါပေမယ့် စက်ရုပ်က ကိုယ်ပိုင်ခံစားမူ့ရှိလာတယ်ဆိုပေမယ့်
သူ့အထဲကို ထည့် ထားတဲ့ ဒေတာ ထက်တော် ကျော်လွန်ပြီး
စဉ်းစားနိုင်စွမ်း ခံစားနိုင်စွမ်း ရှိမလာနိုင်ဘူးလို့တော့ ယုံကြည်ပါတယ်။
နောက် လူ့ဘ၀ရဲ့ နေမူ့ထိုင်မူ့ စည်းကမ်းကို ဘာသာရေးနဲ့ တွဲပြီးထားကြတာက
ကောင်းတာလုပ်ရင် တက် နတ်ပြည်
မကောင်းတာလုပ်ရင် ဆင်း ငရဲပြည်
ဒါတွေက အလွယ်တကူ မမြင်နိုင် သက်သေပြလို့ မရနိုင်တာတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဘဲမြင်ပါတယ်။
ကောင်းအောင်နေဘို့ဆိုတာကတော့ ဒီဘာသာတရားက ချမှတ်တဲ့ စံနူန်းနဲ့နေမှ မဟုတ်ပါဘူး
သူများကို မထိခိုက်အောင် နေရင် ကောင်းအောင်နေခြင်းပါဘဲ
အောင် မိုးသူ says: ချက်ပီကတော့ အရမ်းပေါက်မယ်ထင်ခဲ့ပြီး သိပ်မပေါက်ခဲ့သလိုပဲနော။ ခုနောက်ပိုင်း အခွေတွေသာ စုဖြစ်ပြီး မကြည့်မိသေးဘူး။
Mike says: .မီကျိဖူးသေးဘူး
Alinsett @ Maung Thura says: .ကြည့်ပြီးတာ မကြာသေးဘူး။
.ကြိုက်မိတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲ ဆိုပါတော့. .